Orinasa mpamatsy voninkazo China Corten sy mpamatsy | Hongyi
Laser nanapaka vy metaly toradroa vilany voninkazo vy
Voninkazo / zavamaniry
60cm * 40cm * 40cm na namboarina ho fangatahana
Haingo / trano
5-7 Fotoana fiasana
Manodidina ny 45 andro aorian'ny nahazoana baiko ofisialy
1. Hanjary ho manintona kokoa hatrany ny fitaovana rehefa mandeha ny fotoana.
2. Noho ity faritra harafesina ity dia mora ampiasaina.
3. Ka ho safidy tsara ny mametraka an'io sary sokitra io amin'ny haingon-trano.
4. Afaka manao azy amin'ny habe samihafa isika, hihaona amin'ny takian'ny mpanjifa izany.
1. Manome serivisy, famolavolana, famokarana ary fonosana iray izahay.
2. Kalitao ambony, vidin'ny fifaninanana ary serivisy tsara.
3. OEM, tolotra ODM natolotra.
Corten Steel - Surf an'ny harafesina miaraka amina fiarovana
Corten dia karazana vy izay voajanahary amin'ny toetr'andro rehefa mandeha ny fotoana, ary mampivelatra sosona harafesina manintona sy miaro. Tena mifanohitra amin'izay, satria na harafesina aza, amin'ny lafiny iray, ny velarana dia manana sosona miaro amin'ny lozika lavitra.
Raha lazaina amin'ny teny hafa, ny vy dia avela ho harafesina mba hamoronana ilay saron-javatra miaro. Ity sosona fiarovana ity dia mivoatra noho ireo singa izay miasa amin'ny alika vy.
Miverina tsy tapaka izy io rehefa iharan'ny herin'ny rano sy ny oxygen.
Mamorona fampisehoana mahafinaritra anao miaraka amin'ireo zavamaniry tianao amin'ity mpamboly mahafinaritra ity. Miaraka amin'ny kalitaon'ny organika sy ny tany, dia miasa tsara indrindra ao amin'ny zaridaina izy, manasongadina ireo zavamaniry miloko marevaka sy biriky tsara tarehy.
Ny sary eo ankavanana dia mampiseho ny endrik'ilay mpamboly raha vao tonga izy io ary alohan'ny hananganana ny sosona fiarovana dia mitovy amin'ny mpamboly vy mahazatra. Raha irinao dia azonao atao ny manafaingana ny fizotry ny harafesina amin'ny alàlan'ny fampiasana lamba sy fanosehana sira sy / na vinaingitra ny tampony.
fonosana: Sombin-javatra malefaka ao anatiny ary boaty hazo any ivelany
Delivery: 25 andro aorian'ny nahazoana ny petra-bola
Manaraka: Fantsona fantsom-boaloboka vy tsy misy vy mihodina